ARCHIVE, COVER STORY, POWER NEWS, SEE, SPECIAL » प्लस टुमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा कमिसनको यस्तो खेल, विद्यार्थीका टाउका गनेर दिईन्छ कमिसन !
काठमाडौँ - परिमार्जित एसएलसी अर्थात अहिलेको एसईई परिक्षाको नतिजा आएसँगै विद्यार्थीहरु कलेज दौडाहामा छन् । आफ्नो कलेजमा सकेसम्म बढी विद्यार्थी तान्ने खेलमा कलेजहरुले अनेकौं हतकण्डाहरु अपनाईरहेका छन् । यसैबीच विभिन्न कलेजहरुले विद्यार्थी ल्याईदिए वापत विद्यार्थी ल्याउने शिक्षक, वा कुनैपनि दलाललाई कमिसन दिने रहस्य खुलेको छ । विशेषगरी काठमाडौँका विभिन्न साना कलेजहरुमा यस्तो खेल हुने गरेको छ ।
ब्रिजकोर्ष संचालकहरु यस्तो धन्दाका नाइके
यस्तो मानव तस्करीको रुपमा लिईने विद्यार्थी भर्ना गराएर कमिसन लिने धन्दामा विशेषगरी उपत्यकामा सञ्चालित ब्रिजकोर्ष संचालकहरु छन् । विभिन्न कलेजहरुका प्रतिनिधिलाई बार्गेनिंङ गरेर ब्रिजकोर्ष संचालकहरुले विद्यार्थीहरुलाई फकाईफुल्याई कुनै कलेजमा भर्ना गरिदिने र सो भर्ना गरिदिएवापत कमिसन लिने गरेको स्रोतको दावी छ । 'कलेज हेरेर कमिसनको रेट फरक छ । कसैले प्रति विद्यार्थी ५००० देखि १५००० सम्म कमिसन दिने गरेका छन् भने साना कलेजहरुले प्रतिविद्यार्थी २५०० देखि ४००० सम्म कमिसन दिने गरेका छन् । उनका अनुसार यसरि कमिसन उठाएर विद्यार्थी भर्ना गराउनेहरुमा ब्रिज कोर्ष संचालकका अलावा विभिन्न स्कुलका शिक्षकहरुपनि छन् । 'विद्यार्थीसँग नजिक भएका केहि शिक्षकहरु यस्तो धन्दामा लागेका छन् । कलेजसँग कुरा गर्ने अनि विद्यार्थीहरुलाई फकाएर भर्ना गराउने । त्यसपछी कलेजबाट कमिसन लिने । यस्तो धन्दा बर्षौंदेखि चलीआएको छ ।' उनले भने ।
ठुलै कलेजहरुको फरक तरिका तर उस्तै खेल
यता काठमाडौँका केहि महंगा कलेजहरुले पनि फरक तरिका अपनाएर उस्तै खेल खेल्ने गरेका छन् । 'ठुला कलेजहरुले ठुलै र महंगा स्कुलहरुमा 'सेटिङ' मिलाएका हुन्छन् । यसरी ती स्कुलहरुबाट आफ्नो कलेजमा आएका विद्यार्थीका टाउका गनेर स्कुलका प्रतिनिधीहरुलाई कमिसन दिने गरिएको छ । यतिसम्मकि विद्यार्थी उठाउने यस्तो खेलमा कतिपय स्कुल रकलेजका प्रिन्सिपलहरुलेनै बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन् । यसो त उपत्यकाका केहि कलेज संचालकहरुपनि यस्तो हुने गरेको स्वीकारछन् । 'हामीलेपनि यस्तो हुन्छ भन्ने सुनेका / देखेका छौं ।' आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा एक कलेज संचालक भन्छन्, 'कमिसन पाए मेरो आफ्नै भाइले आफ्नो स्कुलका विद्यार्थी अन्त पठाउँछ । मैले कमिसन नदिई सुख नै छैन । के गर्नु ?' उनका अनुसार यसरी कमिसनको भाग भन्दै कक्षा ११ मा मात्र होइन कक्षा १२ मा विद्यार्थीले तिरेको शुल्कमा पनि उठाउने गरिएको छ।'
Tags : ARCHIVE, COVER STORY, POWER NEWS, SEE, SPECIAL